Kooxda Jahbat al-Nusra oo taabacsan ururka Alqaacida ayaa soo ridey diyaarad dagaal oo ay dowlada Siiriya leedahay meel ku dhow magaalada Aleppo.
Kooxda saldhigeedu yahay London ee ah kormeerta xuquuqda aadanaha ee dalka Siiriya ayaa sheegtay in ay arkeen qiiq iyo holac ka baxaya diyaarada oo ka dhacday deegaan lagu magacaabo Talat al-Iss.
Dagaalamayaal ka tirsan ururka Jabhat al-Nusra ayaa la sheegay in ay qabteen duuliyihii diyaarada oo nool kadibna waxa ay u kaxeeyeen sida la sheegay xaruntooda.
Duuliyaha diyaarada oo magaciisa lagu sheegay Colonel Khaled Saeed ayaa la soo bandhigay muuqaalkiisa. Hase ahaatee lama garanayo nooca diyaarada dagaal ee uu duulinayay Khaled.
Muuqaalo video ah ayaa la soo dhigay baraha bulshada taasoo ay ka muuqatay burburka diyaarada oo ololeysa.
Xabad joojin jilicsan ayaa waxaa la kala dhex dhigay dowlada Siiriya iyo kooxaha mucaaradka hase yeeshee ururada xiriirka la leh Alqaacida iyo IS kama mid aha xabad joojinta.
Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa ay dowlada Siiriya ay qabsanayeen deegaano ay maamulayeen ururada xiriirka la leh argagaxisada.
More in this category: « Luqada Carabiga Oo Noqotay Luqada Labaad Ee Looga Hadlo Dalka Swedan, Afsoomliguna Cidhiidhsaday Kaalinta 13aad (Audio)	Askar Qafaal Ahayd Oo Ciidanaka Milatariga Dalka Eritrea Ku Laayeen Magaalada Asmara Ee Caasimada Dalkaas »